warkii.com » Dowladda Somalia oo fariin adag udirtay Safiirka Mareykanka ee Somalia kadib talaabadii Aqalka cad…
Sawirro: Ra’iisal Wasaaraha magacaaban oo kulan la qaatay Mahdi Guuleed iyo xildhibaano
Dowladda Somalia oo fariin adag udirtay Safiirka Mareykanka ee Somalia kadib talaabadii Aqalka cad…
Dowladda Somalia ayaa si weyn uga carootay Go’aankii Mareykanku ku taageeray Xariirkii dhawaan dhexmaray Somaliland iyo Taiwan.
War kasoo baxay Aqalka Cad gaar ahaan waaxda arrimaha Amniga Qaranka ayaa lagu ammaanay xariirka diblumaasiyadeed ee Tiawan ay ka bilowday Bariga Afrika gaar ahaan “Somaliland.”
Dowladda Somalia oo aanan raali ka aheyn Xariirka Somaliland iyo Taiwan – Warqaad.com
Mareykanka ayaa la aamisan yahay inuu talaabadan u qaaday sababo la xariira Xiriirka xun ee kala dhexeeya Shiinaha , Taiwan oo ah maamul dimuquraadi ah ayaa xiriir la leh illaa 15 dal oo keliya,inkastoo 7 ka mid ah ay aqoonsiga kala laabteen, jasiiradan sidoo kale ma aqoonsana QM.
“Waa muhiim in la arko Taiwan oo sare u qaadeysa shaqadeeda xiriir ee Bariga Afrika, xilligan oo ay baahi badan jirto,” ayaa lagu qoray -ka Laanta Amniga Qaran ee Mareykanka.
“Taiwan waa saaxiib ku fiican caafimaadka, waxbarashada, iyo kaalmada farsamo, iyo waxyaabo kale oo badan!” ayaa ka mid ahaa wixii lagu qoray barta NSC.
Farriintaas waxay daba socotay heshiiska dhowaan ay wada saxiixdeen Taiwan oo Shiinaha uu u aqoonsan yahay gobol dalkiisa ka tirsan iyo Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland.
Si kastaba, Warkan kasoo baxay Mareykanka ayaa waxaa si weyn uga carooday dowladda Somalia,
War ay Warqaad ka heshay Wasaarada arimaha dibadda Somalia ayaa sheegaya in Xukuumadda Muqdisho aysan marnaba aqoonsaneyn wixii dhexmaray Somaliland iyo Taiwan , isla markaana Mareykanku xaq u laheyn inuu si xushmad daro ah uga hadlo arintan.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Dowladda Somalia ay warqad cabasho ah udirtay Safiirka Somalia ujooga Muqdisho, maadaama Somaliland ay wali qeyb a tahay Somalia.
”Wasiirka ayaa Warqad udiray Safaaradda Mareykanka, si loo kala cadeeyo in Mareykanku uu aqbalo in Somaliland ay xariir diblumaasiyadeed la yeelato dal ugu diiwaan gashan Mareykanka dal ahaan”ayuu yiri Sargaal ka tirsan Wasaarada oo Warbixintan nasiiyay.
Ilaa haatan safaaradda Mareykanka ayaana ka jawaabin Warqada uga timid Wasaaradda arimaha dibadda Somalia.
Madaxweynaha Somalia ayaa dowladda Shiinaha ku wargeliyay iney kaliya aqoonsan yihiin dal weynaha Shiinaha oo ay qeyb ka tahay Taiwan, laakiin Washintong ayaa dhanka kale taageertay cilaaqaadka labada dhinac dhexmaray